DF oo laga dalbaday in ay dirto guddi sameeya baaris ka dhan ah Waare
Madaxweynaha HirShabelle ayaa wajahay eedeymo ku saabsan in uu si shaqsi ah u isticmaalay xoolo dan guud ah.
BELEDWAYNE, HirShabelle – Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka HirShabelle ayaa ku eedeeyay madaxweynaha maamulkaas, Maxamed Cabdi Waare, in uu si shaqsi ah u isticmaalay gurmadkii loogu deeqay Beledwayne.
Mudaneyaasha ayaa intaas ku daray in Waare uu diidey in wax laga waydiiyo halka ay ku baxday lacagtaas iyo haddii uu gacanta ku hayo.
Aadan Kala-dire, oo kamid ah sharci-dejiyeyaasha, ayaa dowladda federaalka ah ka codsaday in ay dirto guddi baaritaan ku sameeya lacagtaas.
"Annagoo koox Xildhibaano ah ayaan u tagnay madaxweynaha, jawaab waafi ah wuu naga siin waayey, nasiib darro waaye taasina," ayuu xusay.
Xilli uu xukuumadda federaalka ka dalbaday in ay dhageysato baaqooda, Aadan ayaa tibaaxay "in musuqmaasuq baahsan uu ka jiro HirShabelle".
Bishaan May 10-keeda ayay ahayd markii Waare uu baraha bulshadda kusoo qoray in ay soo gaartay in ka badan hal milyan oo Doolar-ka Mareykanka ah, taas oo ka kala timid dowladdaha Soomaaliya iyo Jabuuti.
"Waxaa maanta 10/5/2020 naga soo gaaray Dawladda Federalka Soomaaliya; $600,000, Dawladda Jabuuti Hiil Walaal; $42,000 Guddiga Gargaarka Heer Qaran oo loogu talogalay fatahaadda. Shukran @M_Farmaajo @HassanAKhaire @IsmailOguelleh," ayuu tibaaxay.
Shaacinta Waare ayaa timid maalmo kadib markii guddi ku howlan siddii looga hortagi lahaa fatahaad mar kale ka dhacda Beledwayne uu qiray in dedaalada ay wadaan aysan wax lug ah ku lahayn dowladda iyo maamulka.
Tani ayaa dhalisay dhaliilo loo jeediyay dowladda iyo maamulka HirShabelle oo ahaa in aysan bixin lacagta gurmadka ahayd iyo in ay ka gaabiyeen maalgelinta dedaalo looga hortagayo dadaad mar kale ku dhufta Beledwayne.
Soomaaliya ayaa lagu tilmaamaa mid kamid ah wadamada caalamka ee ay ka jiraan musuqmaasuqa ugu balaaran isla markaana mas'uuliyiinta qaarkood ay isticmaalaan dhaqaalaha loogu talagalay in ay shacabka ugu adeegaan.
HirShabelle oo heshay qalabka baarista xili ay madax karantiilan yihiin
Soomaliya 13.04.2020. 13:30
Diyaarad qaas ah oo nooca qumaatiga u kacda ah ayaa lagu waramay in ay agabka ka dejisay Jowhar.
Maamulka Waare oo amar dul-dhigay hay'addaha gargaarka ee HirShabelle
Soomaliya 19.01.2020. 07:35
Mooshin ka dhan ah Waare oo loo gudbinayo baarlamaanka HirShabelle
Soomaliya 26.12.2019. 07:58
Waare oo ka hadlay guddi uu Farmaajo u saarey dilkii taliye Macow
Soomaliya 13.06.2019. 01:04
Madaxweynaha maamulka HirShabelle oo magacaabay wasiiro cusub
Soomaliya 13.06.2020. 08:00
Waare oo madaxda DF u diray digniin ku aadan doorashada soo aadan
Soomaliya 11.12.2019. 17:48
Soomaaliya oo ku biirtay dalalka Afrika ee ay haweenay maamusho magaalo
Soomaliya 30.05.2019. 09:54